သူငယ်ချင်းရဲ့ ရည်းစားဟောင်းနဲ့ဆုံစည်းဖို့အကြောင်းဖန်လာတဲ့အခါ ဘာဆက်လုပ်သင့်လဲ?🤔 – Trend.com.mm
သူငယ်ချင်းရဲ့ ရည်းစားဟောင်းနဲ့ဆုံစည်းဖို့အကြောင်းဖန်လာတဲ့အခါ ဘာဆက်လုပ်သင့်လဲ?🤔
Posted on September 6, 2018 September 6, 2018 by Noel
Dating Rule ဆိုတာတွေအများကြီးရှိတဲ့အထဲကမှ ကိုယ့်သူငယ်ချင်းရဲ့ ရည်းစားဟောင်းနဲ့မတွဲသင့်ဘူးလို့ လူတော်တော်များများက လက်ခံယုံကြည်ထားကြတယ်။ဒါက သူငယ်ချင်းစည်းမျဉ်းကိုချိုးဖောက်တယ်ပေါ့။အဲ့ဒါကတကယ်ရောမှန်ရဲ့လား?သူငယ်ချင်းရဲ့ ရည်းစားဟောင်းနဲ့ ကိုယ်က ဘာညာအနေအထားဖြစ်နေတယ်(သူကလည်းကိုယ့်ကိုသဘောကျနေတယ် ကိုယ်ကလည်းသူ့ကိုပြန်သဘောကျတယ်)ဆိုရင် ဒီအချက်က ထည့်ပြီးစဉ်းစားရတော့မှာအမှန်ပါပဲ။သူငယ်ချင်းအပေါ်လည်းသစ္စာဖောက်သလိုဖြစ်မှာစိုး၊ကိုယ့်အချစ်ကိုလည်း မရုတ်သိမ်းနိုင်ဖြစ်နေပြီဆိုရင် ဘယ်လိုလုပ်သင့်လဲ?
ပထမဆုံး စိတ်ကိုအေးအေးဆေးဆေး တည်တည်ငြိမ်ငြိမ်ထားပါ။ ပြီးတော့ ကိုယ်ဘာလုပ်ချင်လဲ ပြန်စဉ်းစားကြည့်ပါ။အချိန်တန်ရင်အဆင်ပြေသွားမှာပါဆိုပြီး နှလုံးသားဆန္ဒကိုလျစ်လျူရှုချင်လား?မျက်စိမှိတ်ရှေ့တိုးလိုက်လို့ သူငယ်ချင်းဖြစ်သူရော၊တစ်ခြားသူတွေပါနာကျင်ရမှာစိုးရိမ်နေလား?တကယ်လို့ သူငယ်ချင်းက သူ့ရည်းစားဟောင်းကိုသံယောဇဉ်မပြတ်သေးဘူးဆိုရင် အဲ့ဒီအချိန်မှာ ကိုယ့်ရဲ့ လုပ်ရပ်ကြောင့် သူငယ်ချင်းနဲ့ကိုယ့်ကြား ဆက်ဆံရေးပြတ်စဲတာမျိုးဖြစ်သွားပါလိမ့်မယ်။ပြီးတော့ ကိုယ်ကလည်းသူ့ကိုပြန်သဘောကျပါရက်ငြင်းလိုက်မယ်ဆိုရင် ကိုယ်က အသည်းထိုင်ကွဲရမှာမျိုး စသဖြင့်ဖြစ်နိုင်ချေမှန်သမျှကိုတော့စဉ်းစားထားဖို့လိုပါတယ်။
နောက်တစ်ခုစဉ်းစားရမှာက သူတို့ရဲ့ သံယောဇဉ်ကရော တကယ်ပဲပြီးဆုံးသွားတာဟုတ်ရဲ့ လား?ဘယ်သူ့ဘက်က ဘာကြောင့်ပြတ်ခဲ့တာလဲ?ဖြေရှင်းလိုက်ရင်အဆင်ပြေသွားနိုင်တဲ့အဆင့်လား?စသဖြင့်ပေါ့။ဒီအချိန်မှာသူငယ်ချင်းရဲ့ ရည်းစားဟောင်းက ကိုယ့်ကိုသဘောကျတယ်လို့ထင်နေရင်တောင် သူ့ဘက်က ကိုယ့်သူငယ်ချင်းအပေါ်တကယ်ပဲသံယောဇဉ်ပြတ်တာလား?ကိုယ့်ကိုအသုံးချတာလား၊တကယ်သဘောကျတာလား?ဆိုတာ သိဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ကိုယ်ရှေ့ဆက်လုပ်ရမယ့်အရာနဲ့ပတ်သက်ပြီး သေချာနက်နက်နဲနဲစဉ်းစားတာက အကောင်းဆုံးဖြစ်စေပါလိမ့်မယ်။
အကြံပေးရမယ်ဆိုရင်တော့ သူငယ်ချင်းဆက်ဆံရေးကိုတန်ဖိုးထားတယ်။မပျက်စီးချင်ဘူးဆိုရင် သူငယ်ချင်းအပေါ်လေးစားမှုရှိပါ။ရိုးသားမှုရှိပါ။သူမရဲ့ ရည်းစားဟောင်းနဲ့ပတ်သက်လို့ ကိုယ့်ရဲ့ခံစားချက်တွေ၊သူနဲ့အခြေအနေတွေကိုပြောပြပါ။သူမဘက်က ဘာပြောရမလဲဖြစ်ချင်ဖြစ်သွားနိုင်သလို အံ့သြသွားတာလည်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ဒါမှမဟုတ် အဲ့ဒီလိုကိုယ်ပြောလိုက်မှ သူမရဲ့ ရည်းစားဟောင်းကို တကယ်မပြတ်နိုင်ဘူးဆိုတာသိသွားတာလည်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ အဲ့ဒီလိုဖြစ်သွားနိုင်တယ်ဆိုပြီးမပြောပဲနေတာက လုံးဝကိုဆိုးတဲ့အကြံပါ။သူမဘက်က သူမရဲ့ ရည်းစားဟောင်းအပေါ်တကယ်သံယောဇဉ်ပြတ်သွားပြီဆိုရင်တော့ ကိုယ့်နှလုံးသားဘက်ကိုပိုပြီးဦးစားပေးလို့ရတာပေါ့။တကယ်လို့သူမဘက်က ကိုယ်နဲ့သူ့ရည်းစားဟောင်းကိုဘယ်လိုမှသဘောမတူနိုင်ဘူး၊သူ့ရည်းစားဟောင်းကိုကြိုက်ရမလား ဘာညာဖြစ်နေမယ်ဆိုရင် အချစ်ဆိုတာကိုသူမသေချာနားလည်လက်ခံလာမယ့်အချိန်ထိစောင့်တာအကောင်းဆုံးပါပဲ။ဖူးစာဆိုတာ ကြိုမမြင်ရလို့ ကိုယ့်ကိုယ့်ကိုယ်လည်းအရမ်းအပြစ်မတင်ပါနဲ့။သူမနဲ့ပြတ်သွားတာကြာပြီဖြစ်တဲ့ရည်းစားဟောင်းက ကိုယ့်အပေါ်တကယ်သဘောကျတယ်ဆိုရင်သူလည်း စောင့်ပါလိမ့်မယ်။ကိုယ့်အတွက်ကြိုးစားပေးပါလိမ့်မယ်။
နောက်ဆုံးတစ်ခုပြောချင်တာကတော့ ဒီစာက ကိုယ့်သူငယ်ချင်းနဲ့သူ့ရည်းစား ပြတ်စဲပြီး အချိန်ကာလအတော်ကြာမှ ကိုယ်နဲ့ဆုံဖို့ကံတရားကဖန်တီးလာရင် စဉ်းစားရခက်နေသူတွေအတွက် အကြံပေးတဲ့စာပါ 📧တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက်ချစ်ဖို့ ဘယ်သူကမှတိုက်တွန်းလို့မရသလို ဘယ်သူကမှကြားဝင်ဆုံးဖြတ်ပေးလို့မရပါဘူး။အဓိကက ကိုယ့်ဘက်က သူငယ်ချင်းအပေါ်စစ်မှန်ဖို့နဲ့ ကိုယ့်ရဲ့အချစ်ကလည်း စစ်မှန်ဖို့ပဲလိုပါတယ်။အဲ့ဒါဆို သူငယ်ချင်းသံယောဇဉ်လည်းမပျက်စီးသလို ပျော်ရွှင်စရာကောင်းတဲ့အချစ်ရေးကိုပိုင်ဆိုင်နိုင်မှာပါ 🌸
Dating Rule ဆိုတာတှအေမြားကွီးရှိတဲ့အထဲကမှ ကိုယျ့သူငယျခငျြးရဲ့ ရညျးစားဟောငျးနဲ့မတှဲသငျ့ဘူးလို့ လူတျောတျောမြားမြားက လကျခံယုံကွညျထားကွတယျ။ဒါက သူငယျခငျြးစညျးမဉျြးကိုခြိုးဖောကျတယျပေါ့။အဲ့ဒါကတကယျရောမှနျရဲ့လား?သူငယျခငျြးရဲ့ ရညျးစားဟောငျးနဲ့ ကိုယျက ဘာညာအနအေထားဖွဈနတေယျ(သူကလညျးကိုယျ့ကိုသဘောကနြတေယျ ကိုယျကလညျးသူ့ကိုပွနျသဘောကတြယျ)ဆိုရငျ ဒီအခကျြက ထညျ့ပွီးစဉျးစားရတော့မှာအမှနျပါပဲ။သူငယျခငျြးအပျေါလညျးသစ်စာဖောကျသလိုဖွဈမှာစိုး၊ကိုယျ့အခဈြကိုလညျး မရုတျသိမျးနိုငျဖွဈနပွေီဆိုရငျ ဘယျလိုလုပျသငျ့လဲ?
ပထမဆုံး စိတျကိုအေးအေးဆေးဆေး တညျတညျငွိမျငွိမျထားပါ။ ပွီးတော့ ကိုယျဘာလုပျခငျြလဲ ပွနျစဉျးစားကွညျ့ပါ။အခြိနျတနျရငျအဆငျပွသှေားမှာပါဆိုပွီး နှလုံးသားဆန်ဒကိုလဈြလြူရှုခငျြလား?မကျြစိမှိတျရှတေို့းလိုကျလို့ သူငယျခငျြးဖွဈသူရော၊တဈခွားသူတှပေါနာကငျြရမှာစိုးရိမျနလေား?တကယျလို့ သူငယျခငျြးက သူ့ရညျးစားဟောငျးကိုသံယောဇဉျမပွတျသေးဘူးဆိုရငျ အဲ့ဒီအခြိနျမှာ ကိုယျ့ရဲ့ လုပျရပျကွောငျ့ သူငယျခငျြးနဲ့ကိုယျ့ကွား ဆကျဆံရေးပွတျစဲတာမြိုးဖွဈသှားပါလိမျ့မယျ။ပွီးတော့ ကိုယျကလညျးသူ့ကိုပွနျသဘောကပြါရကျငွငျးလိုကျမယျဆိုရငျ ကိုယျက အသညျးထိုငျကှဲရမှာမြိုး စသဖွငျ့ဖွဈနိုငျခမြှေနျသမြှကိုတော့စဉျးစားထားဖို့လိုပါတယျ။
နောကျတဈခုစဉျးစားရမှာက သူတို့ရဲ့ သံယောဇဉျကရော တကယျပဲပွီးဆုံးသှားတာဟုတျရဲ့ လား?ဘယျသူ့ဘကျက ဘာကွောငျ့ပွတျခဲ့တာလဲ?ဖွရှေငျးလိုကျရငျအဆငျပွသှေားနိုငျတဲ့အဆငျ့လား?စသဖွငျ့ပေါ့။ဒီအခြိနျမှာသူငယျခငျြးရဲ့ ရညျးစားဟောငျးက ကိုယျ့ကိုသဘောကတြယျလို့ထငျနရေငျတောငျ သူ့ဘကျက ကိုယျ့သူငယျခငျြးအပျေါတကယျပဲသံယောဇဉျပွတျတာလား?ကိုယျ့ကိုအသုံးခတြာလား၊တကယျသဘောကတြာလား?ဆိုတာ သိဖို့လိုအပျပါတယျ။ကိုယျရှဆေ့ကျလုပျရမယျ့အရာနဲ့ပတျသကျပွီး သခြောနကျနကျနဲနဲစဉျးစားတာက အကောငျးဆုံးဖွဈစပေါလိမျ့မယျ။
အကွံပေးရမယျဆိုရငျတော့ သူငယျခငျြးဆကျဆံရေးကိုတနျဖိုးထားတယျ။မပကျြစီးခငျြဘူးဆိုရငျ သူငယျခငျြးအပျေါလေးစားမှုရှိပါ။ရိုးသားမှုရှိပါ။သူမရဲ့ ရညျးစားဟောငျးနဲ့ပတျသကျလို့ ကိုယျ့ရဲ့ခံစားခကျြတှေ၊သူနဲ့အခွအေနတှေကေိုပွောပွပါ။သူမဘကျက ဘာပွောရမလဲဖွဈခငျြဖွဈသှားနိုငျသလို အံ့သွသှားတာလညျးဖွဈနိုငျပါတယျ။ဒါမှမဟုတျ အဲ့ဒီလိုကိုယျပွောလိုကျမှ သူမရဲ့ ရညျးစားဟောငျးကို တကယျမပွတျနိုငျဘူးဆိုတာသိသှားတာလညျးဖွဈနိုငျပါတယျ။ဒါပမေဲ့ အဲ့ဒီလိုဖွဈသှားနိုငျတယျဆိုပွီးမပွောပဲနတောက လုံးဝကိုဆိုးတဲ့အကွံပါ။သူမဘကျက သူမရဲ့ ရညျးစားဟောငျးအပျေါတကယျသံယောဇဉျပွတျသှားပွီဆိုရငျတော့ ကိုယျ့နှလုံးသားဘကျကိုပိုပွီးဦးစားပေးလို့ရတာပေါ့။တကယျလို့သူမဘကျက ကိုယျနဲ့သူ့ရညျးစားဟောငျးကိုဘယျလိုမှသဘောမတူနိုငျဘူး၊သူ့ရညျးစားဟောငျးကိုကွိုကျရမလား ဘာညာဖွဈနမေယျဆိုရငျ အခဈြဆိုတာကိုသူမသခြောနားလညျလကျခံလာမယျ့အခြိနျထိစောငျ့တာအကောငျးဆုံးပါပဲ။ဖူးစာဆိုတာ ကွိုမမွငျရလို့ ကိုယျ့ကိုယျ့ကိုယျလညျးအရမျးအပွဈမတငျပါနဲ့။သူမနဲ့ပွတျသှားတာကွာပွီဖွဈတဲ့ရညျးစားဟောငျးက ကိုယျ့အပျေါတကယျသဘောကတြယျဆိုရငျသူလညျး စောငျ့ပါလိမျ့မယျ။ကိုယျ့အတှကျကွိုးစားပေးပါလိမျ့မယျ။
နောကျဆုံးတဈခုပွောခငျြတာကတော့ ဒီစာက ကိုယျ့သူငယျခငျြးနဲ့သူ့ရညျးစား ပွတျစဲပွီး အခြိနျကာလအတျောကွာမှ ကိုယျနဲ့ဆုံဖို့ကံတရားကဖနျတီးလာရငျ စဉျးစားရခကျနသေူတှအေတှကျ အကွံပေးတဲ့စာပါ 📧တဈယောကျနဲ့တဈယောကျခဈြဖို့ ဘယျသူကမှတိုကျတှနျးလို့မရသလို ဘယျသူကမှကွားဝငျဆုံးဖွတျပေးလို့မရပါဘူး။အဓိကက ကိုယျ့ဘကျက သူငယျခငျြးအပျေါစဈမှနျဖို့နဲ့ ကိုယျ့ရဲ့အခဈြကလညျး စဈမှနျဖို့ပဲလိုပါတယျ။အဲ့ဒါဆို သူငယျခငျြးသံယောဇဉျလညျးမပကျြစီးသလို ပြျောရှငျစရာကောငျးတဲ့အခဈြရေးကိုပိုငျဆိုငျနိုငျမှာပါ 🌸
မိသားစုဆိုတဲ့ အဓိပ္ပာယ်ကို သေချာဖော်ညွှန်းပြသထားတဲ့ Instant Family
မေ့လျော့မှုဟာ ပုံမှန်မဟုတ်တဲ့ ဥာဏ်ကောင်းခြင်းတစ်မျိုးလို့ သိပံ္ပပညာရှင်များသုံးသပ်